In la abuuro qaab waxbarasho "ganacsi iskuul, ganacsi iyo kornayl".
Isabella, oo ah aasaasaha Isa, waa macallin waqti-buuxa ah oo asal ahaan ka soo jeeda waxbarashada Jiangxi Farsamada Gacanta ee Dalxiiska iyo Ganacsiga. Waxay ka furtay iskuulka iskuulka iskaashi ganacsi, si ay ugu sahmiso fikradda waxbarashada xirfadeed ee sare ...
ISA waxay ku qaadatay 2 sano inay sameyso in ka badan 300 nooc oo aad dooratay. Waxaad ku dari kartaa nashqadeynta qaababkan waxaadna la jaan qaadi kartaa qalabka aad u baahan tahay si aad naftaada uga dhigto mid ka duwan.
ISA waxay ku qaadatay 2 sano inay sameyso in ka badan 300 nooc oo aad dooratay. Waxaad ku dari kartaa nashqadeynta qaababkaan oo waxaad isbarbar dhigi kartaa qalabka aad u baahan tahay si aad adigu iskaga dhigto mid ka duwan. 20 + naqshado cusub maalin kasta.Waxaan u soo saarnay qaabab kala duwan oo loogu talagalay lebis kasta si dharkaagu u ekaado mid aad u badan ...